Sony Xperia Z5 Premium, anyị nyochaa ya na vidiyo | Gam akporosis
Alfonso nke mkpụrụ osisi | | IFA, Sony
Sony enyela nnukwu mgbịrịgba n'oge ngosi nke ekwentị ha na mbipụta ọhụrụ nke IFA na Berlin. Ma ọ bụ na ọ dịghị onye tụrụ anya na ndị nrụpụta Japan ga-eweta ekwentị mbụ nwere ihuenyo 4K; Sony Xperia Z5 adịchaghị.
Dị ka ị maara nke ọma, Sony Spain kpebiri ime na-enweghị Xperia Z4. Companylọ ọrụ ahụ n’onwe ya matara na ekwentị a abụghị ọkọlọtọ, yabụ ndị enyemaka Spanish kpebiri ichere maka ọgbọ na-abịa abịa. Na ịhụ Sony Xperia Z5 Premium, o doro anya na ha mere nke ọma.
Sony Xperia Z5 Premium, ekwentị dị ike na ihuenyo 4K
Ma ọ bụ na ọ bụrụ na anyị echebara na Sony Xperia Z5 adịchaghị akwụ ụgwọ naanị 100 euro karịa ot nlereanya, M na-atụle na ọ bụ nnọọ uru emefu na ihe dị iche na-enwe ike ịnụ ụtọ uru na ụdị nke nkà na ụzụ na-enye.
Kedu ihe ị chọrọ a 4K ihuenyo ekwentị? Dị ka ọ dị, ị nwere ike iji UHD panel nke jikọtara Sony Xperia Z5 Premium, mana ọ bụrụ na anyị echebara na igwefoto Sony Exmor dị ike 23 megapixel na-enye gị ohere ịdekọ vidiyo na mkpebi 4K, Xperia Z5 Premium panel ga-enye gị ohere ịnụ ụtọ ha niile vidiyo ịdekọtara na nke kachasị elu, n'agbanyeghị mkpebi nke ịdekọtara ha.
Ọ bụrụ na nke a, anyị tinye ihe nhazi dị ike Qualcomm Snapdragon 810Obi sie gị ike na ọ bụ ụdị ahụ na - enweghị nsogbu ọkụ, 3 GB nke RAM, 32 GB nke nchekwa dị n’ime nwere ike ịgbasa site na oghere kaadi micro SD ya na nguzogide ya na uzuzu na mmiri, anyị nwere ike ịsị na Sony arụ nnukwu ọrụ.
Otu Omnibalance imewe? Ee, ọ dịghị onye ga-agọnahụ nke ahụ onye nrụpụta Japan kpebiri ịkụ nzọ na akara n'ihu. Ihe onye ọ bụla masịrị na-abata ebe a, ụfọdụ ndị anaghị enwe mmasị na usoro Xperia Z niile nwere ụdị atụmatụ a, ndị ọrụ ndị ọzọ achọghị ịma.
Ma gị onwe gị, ị chere na ọ bụ ezi echiche iji uru Omnibalance dị na Xperia, ọ dị mmaNke a Xperia Z5 Premium kwesịrị inwe ụdị ọhụụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Sony » Sony Xperia Z5 Premium, anyị nwalere ekwentị mbụ nwere ihuenyo 4K
g3 abụghị 4k?
Zaghachi Hansel De Aguas®
G3 bụ 2k
Ma obughi nani vidiyo, anyi aghaghi iburu n'uche na foto obula nke 8 megapixels ma obu karie di ugbua 4k mkpebi ma si otua anyi gha enwe ike ihu ha n'uzo ka nma, nke adighi eme ugbua na ngwaọrụ obula
ekpochapu oke ọkụ belatara ekele maka akụkụ dissip 2 ha tinyela. Ma ebe ọ bụ na ọ na-apụta na Nọvemba, ọ dịịrị ha mfe ichere ntakịrị ma tinye 820 na batrị ọzọ, n'ihi na 3430mah na 4k dị obere . Ihuenyo anaghị eru na njedebe nke akụkụ dị ka c5 ultra na bezels ka buru ibu ma laa n'iyi.
Obere okpokolo agba na ogologo ndụ batrị.